May 2, 2021 - Channel Lover
ထိုင်းရောက် မြန်မာလုပ်သားများ ထိုင်းထီ ပထမဆုကံထူးရှင်များ ဖြစ်လာပါက အဓိကလိုက်နာရမည့် အရေးကြီး အချက်အလက်များ….
May 2, 2021 by Channel Lover
ထိုင်းရောက် မြန်မာလုပ်သားများ ထိုင်းထီ ပထမဆုကံထူးရှင်များ ဖြစ်လာပါက အဓိကလိုက်နာရမည့် အရေးကြီး အချက်အလက်များ…. 2-5-2021 ထိုင်းအစိုးရထီထွက်ရက်… (1) ထီလက်မှတ်နောက်ကျောပိုင်းမှာလက်မှတ် ထိုးမည်ဆိုပါက နေထိုင်ခွင့်နှင့် ဝေါ့ပါမစ် အကြိမ်ကြိမ် ရွှေ့ ပြောင်းလုပ်ကိုင်သူဖြစ်ခဲ့ရင် မိမိ၏ လက်မှတ် မထိုးမိစေရန် အထူးသတိပြုပါ၊ (2) ထိုင်းထီပေါက်သူကံထူးရှင် အမည်နဲ့ ဘဏ် အကောင့်ကိုယ်ပိုင် မပြုလုပ်ထားသူများ ထီ လက်မှတ်နောက်ကျောမှာလက်မှတ်မထိုးမိစေရန် ၊ (3) ထီပေါက်သူအမည်နှင့် ရဲစခန်းသို့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် လုံခြုံရေးအရ သတင်းပို့သင့်သော်လည်း ထီပေါက်သူမှာ နေထိုင်ခွင့်စာရွက်စာတမ်းများ မပြည့်စုံပါက သွားရောက်သတင်းပို့ခြင်း မပြုရပါ၊ (4) ကံထူးရှင်ဖြစ်ခဲ့ပါက ဝမ်းသာအားရစိတ်နဲ့FB အွန်လိုင်းပေါ် ပုံရိုက်တင်ခြင်း စက်ရုံအတွင်းလူအများစုကိုလိုက်ပြောခြင်း အလုပ်အတူတူလုပ်နေတဲ့ အခြားနိုင်ငံခြားသားများကိုအကူအညီတောင်းခြင်း ထီလက်မှတ်ကို အခြားသူတစ်ဦးအား ဓါတ်ပုံပေးရိုက်ခြင်းများကိုမပြုလုပ်မိစေရန် အထူးသတိပြုရမည်၊ (5) … Read more
မွနျမာနိုငျငံကွီး အေးခမျြး တော့မယျ့ နိမိတျလား သံဃာတျော အရှငျသူမွတျ အပေါငျး မှ ပရိတျတျောမြား ရှတျပှား ပူဇျော နခြေိနျတှငျ မဟာမုနိ ရုပျရှငျတျောမွတျ ကွီး ကို ပူဇျောထားသော cctv မှ မကျြနှာတျော ရငျဘတျတျော မှ ပွာသော ရောငျခွညျတျော မြားနှငျ့ ဘယျဖကျ လကျမောငျးတျော မှ ဖွူသော ရောငျခွညျတျော မြား ကှနျ့မွူး ထှကျပျေါ လာသညျကို တှေ့ ရှိ ရပါသောကွောငျ့ အမြား ပွညျသူ ဝမျးမွောကျဝမျးသာ ဖူးမွှျော ပူဇျောနိုငျကွ ပါစရေနျ မြှဝေ တငျပွအပျပါသညျ။ မှတျခကျြ။ ကြောငျးတျောကွီး အတှငျး၌ အပွာရောငျမီးလုံး လုံးဝ တပျဆငျထားခွငျးမရှိပါ။ ယ်ခု တငျပွ ပူဇျောခွငျးမှာလဲ ၇ … Read more
သခင်ဖြစ်သူရဲ့ဓာတ်ပုံဘေးနားမှာ တစ်ဖဝါးမှမခွာဘဲ အမြဲစောင့်နေရှာတဲ့ ခွေးလေး
သခင့်ဓာတ်ပုံဘေးနားမှာ အမြဲစောင့်နေရှာတဲ့ သနားစ ရာခွေးလေရဲ့အဖြစ်။ (Zawgyi Code ဖြင့် ဖတ်မရသူများအတွက် အောက်တွင် ယူနီကုဒ်ဖြင့် ဖော်ပြထားရှိပါသည်) ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိဘူး ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဆရာဦးသက်နိုင်ဦး၏ဖခင် ဦးကိုလေး (ရေဦး) ဒုအထွေထွေမန်နေဂျာ(ငြိမ်း) မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ မနက်ဆို အဖိုးကိုလာရှာတယ် အတူတူလမ်းလျှောက်ထွက်နေကြလေ မရှိရင် စိုက်ခင်းထဲလိုက်တယ် ဘေးမှာစောင့်တယ် ​ရေချိုးရင် ရှေ့ကစောင့်တယ် ထိုင်ရင်ဘေးမှာအိပ်စောင့်တယ်၊ အခုလဲအဖိုးကိုဘယ်မှာမှရှာမရတော့ အဖိုးပုံလေးဘေး လာစိုက်ကြည့်တယ်၊ သူမေးချင်နေတဲ့မျက်လုံးလေးတွေက အဖိုးရောလို့ပြောနေသလိုပါပဲ ပီးတော့မထပဲအိပ်နေတယ် အပြင်မှာဘာကြားကြားထွက်သွားတဲ့သူက အခုဘာကြားကြားမသွားဘူး။ aung ko ko oo ​လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ် unicode သခငျ့ဓာတျပုံဘေးနားမှာ အမွဲစောငျ့နရှောတဲ့ သနားစ ရာခှေးလရေဲ့အဖွဈ။ (Zawgyi Code ဖွငျ့ ဖတျမရသူမြားအတှကျ အောကျတှငျ ယူနီကုဒျဖွငျ့ ဖျောပွထားရှိပါသညျ) ဘာပွောရမှနျးတောငျမသိဘူး ညှနျကွားရေးမှူးခြုပျ … Read more
ယနေ့ ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရသော လူငယ်လေးများ
ယနေ့ ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရသော လူငယ်လေးများ သိတဲ့သူများရှိရင် ကူညီလို့ရရင် ကူညီပေးလိုက်ကြပါအုံး အမြန်ဆုံး ပြန်လည်လွတ်မြောက်ပြီး အန္တရာယ်ကင်း ဘေးရှင်းကြပါစေ…။ အဖမ်းခံရမယ်ဆိုရင် အားလုံးမွာ ရှေ့နေ အလကားခေါ်ဖို့ အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ ဒီအောက်မှာရေးထားတဲ့ နံပတ်နဲ့ လူတွေကို မိသားစုဝင်များ လည်းကောင်း ၊ ကေလးမ်ား ကိုယ်တိုင် လည်းကောင်း ဖုန်းခေါ်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ Yangon Region: ILF Yangon : 09-970680153 LCM Yangon (Headquarter): 09-266684448, 09-266684449 LCM Hlaing Tharyar: 09-449919126 အဖမ်းခံရရင် ဆက်သွယ်ပါ. . ကူညီပေးနိုင်မယ့် ရှေ့နေတွေ ရဲ့ Contact တွေပါရှင့် Legal Clinic Myanmar ဒေါ်အိအိမိုး 0973073872 Yangon Justice … Read more
ယနေ့စစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ ဆေးရုံဖွင့်ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့သည့် အနုပညာရှင်များ
ယနေ့စစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ ဆေးရုံဖွင့်ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့သည့် အနုပညာရှင်များ စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ယခင်မှတ်တမ်းရုံး. ယခုမိုးကောင်းရတနာဆေးရုံဖွင့်ပွဲကို စမ်းချောင်းကထွက်ပြေးပြီး ရန်ကင်းစရဖရုံးထဲမှာခိုလှုံနေတဲ့ အဆိုတော်ယုန်လေးအပါအဝင် မယ်လိုဒီ ၊စိုးမြတ်သူဇာ ၊စိုးမြတ်နန္ဒာ ၊ဂျင်းနီ၊ယဉ်လတ် ၊မေသဉ္ဇာဦး၊ရဲအောင် တို့ တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ ပြည်သူတွေက Myanmar Labour News ကိုသတင်းပေးပို့လာပါတယ်။ #MyanmarLabourNews unicode ယနစေ့ဈခေါငျးဆောငျရဲ့ ဆေးရုံဖှငျ့ပှဲကိုတကျရောကျခဲ့သညျ့ အနုပညာရှငျမြား စဈခေါငျးဆောငျမငျးအောငျလှိုငျပိုငျဆိုငျတယျဆိုတဲ့ ယခငျမှတျတမျးရုံး. ယခုမိုးကောငျးရတနာဆေးရုံဖှငျ့ပှဲကို စမျးခြောငျးကထှကျပွေးပွီး ရနျကငျးစရဖရုံးထဲမှာခိုလှုံနတေဲ့ အဆိုတျောယုနျလေးအပါအဝငျ မယျလိုဒီ ၊စိုးမွတျသူဇာ ၊စိုးမွတျနန်ဒာ ၊ဂငျြးနီ၊ယဉျလတျ ၊မသေဉ်ဇာဦး၊ရဲအောငျ တို့ တကျရောကျခဲ့တယျလို့ ပွညျသူတှကေ Myanmar Labour News ကိုသတငျးပေးပို့လာပါတယျ။ #MyanmarLabourNews
ထိုင်းချဲ 3D Live ကြည့်ရန်
ယနေ့ သာကေတမှာ အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ (၁၅)နှစ်အရွယ် မေသီရိကျော်
ယနေ့ သာကေတမှာ အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ (၁၅)နှစ်အရွယ် မေသီရိကျော် Speak out လုပ်ပေးကြပါဦး edit-ရိုက်နေပါတင်ရှင် စစ်ထောင်ကိုပို့မယ်လဲကြားပါတယ် အဖမ်းခံရတဲ့ သူတွေအတွက် အားလုံးဖြန့်ပေးကြပါ !!! အဖမ်းခံရမယ်ဆိုရင် အားလုံးမွာ ရှေ့နေ အလကားခေါ်ဖို့ အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ ဒီအောက်မှာရေးထားတဲ့ နံပတ်နဲ့ လူတွေကို မိသားစုဝင်များ လည်းကောင်း ၊ ကေလးမ်ား ကိုယ်တိုင် လည်းကောင်း ဖုန်းခေါ်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ Yangon Region: ILF Yangon : 09-970680153 LCM Yangon (Headquarter): 09-266684448, 09-266684449 LCM Hlaing Tharyar: 09-449919126 အဖမ်းခံရရင် ဆက်သွယ်ပါ. . ကူညီပေးနိုင်မယ့် ရှေ့နေတွေ ရဲ့ Contact တွေပါရှင့် Legal Clinic Myanmar … Read more
အားလုံးသိအောင်ရှယ်ပေးကြပါ…။ လူငယ်တွေ့တိုင်း ဖမ်းနေပါတယ်..။
အားလုံးသိအောင်ရှယ်ပေးကြပါ…။ လူငယ်တွေ့တိုင်း ဖမ်းနေပါတယ်..။ လူငယ်တွေ့တိုင်း ဖမ်းနေတဲ့ စစ်သားများ ယနေ့ကြည့်မြင်တိုင် ညဈေးဘက်တွင် လမ်းသွားလမ်းလာများကို အကျီ များ ချွတ်စစ်ခြင်း ဖုန်းစစ်ခြင်း အစရှိသည်တို့ကိုပြုလုပ်ပြီး ဖမ်းစီးလျှက်ရှိပါသည်။ ယခုအချိန်မှာတော့ လူငယ်သုံးဦး ဖမ်းခံရသည်ဟုလည်းသတင်းကြားလျှက်ရှိသည်။ ကြည့်မြင်တိုင်ညဈေးနားတွင်လည်း စစ်ကားလေးစီး နေရာယူထားပြီး အရပ်ဝတ် ယူနီဖောင်းများအပြင် နေရာအနှံ ဆိုင်ကယ်များဖြစ်ကင်းလှည့်နေကြောင်းလည်း ကြည့်မြင်တိုင် မှ တာဝန်သိပြည်သူတစ်ဦး၏ သတင်းပေးချက်အရသိရှိရပါတယ်။ photo Cj #MyanmarLabourNews unicode အားလုံးသိအောငျရှယျပေးကွပါ…။ လူငယျတှတေို့ငျး ဖမျးနပေါတယျ..။ လူငယျတှတေို့ငျး ဖမျးနတေဲ့ စဈသားမြား ယနကွေ့ညျ့မွငျတိုငျ ညဈေးဘကျတှငျ လမျးသှားလမျးလာမြားကို အကြီ မြား ခြှတျစဈခွငျး ဖုနျးစဈခွငျး အစရှိသညျတို့ကိုပွုလုပျပွီး ဖမျးစီးလြှကျရှိပါသညျ။ ယခုအခြိနျမှာတော့ လူငယျသုံးဦး ဖမျးခံရသညျဟုလညျးသတငျးကွားလြှကျရှိသညျ။ ကွညျ့မွငျတိုငျညဈေးနားတှငျလညျး စဈကားလေးစီး နရောယူထားပွီး အရပျဝတျ … Read more
သိထားသင့်တဲ့ ဝက်ခြံ အမျိုးအစားတွေနဲ့ ကုသနည်းများ
သိထားသင့်တဲ့ ဝက်ခြံ အမျိုးအစားတွေနဲ့ ကုသနည်းများ ဝက်ခြံတွေဆိုတာကလည်းလေ။ ဒီတိုင်းနေနေရင် အကောင်း။ သွားစရာ၊ လာစရာရှိပြီး။ အရေးကြီးတဲ့သူတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ တွေ့ရပြီဆိုတာနဲ့ ဟိုတစ်မျိုး၊ ဒီတစ်မျိုး လှိမ့်ထွက်လာကြတော့တာပါပဲ တစ်ချို့ကျတော့လည်း နှစ်ရှည်လများ ပေါက်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲပေါက်ပေါက် ဝက်ခြံတွေက အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိပြီး ကုသပုံချင်းမတူညီကြပါဘူး ၁။ ဆားဝက်ခြံ ဆားဝက်ခြံ မှာ အမဲစေ့နဲ့ အဖြူစေ့ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အဆီ၊ ဖုန်မှုန့်၊ အညစ်အကြေးနဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ စုပုံလာပြီး ချွေးပေါက်ပိတ်သွားတဲ့အခါမှာ ဆဲလ်သစ်တွေ ပြန်မမွေးဖွားနိုင်တော့ဘဲ ဆားဝက်ခြံဖြစ်လာရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေနွေးငွေ့နဲ့ ပုံမှန်ပေါင်းတင်ပေးမယ်။ Exfoliate ပုံမှန်လုပ်ပေးမယ်။ မိတ်ကပ် နေ့စဉ် ပုံမှန်ဖျက်ပေးမယ်။ ချွေးပေါက်တွေကိုသာ ပုံမှန်ဖွင့်ပေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ ဆားဝက်ခြံက ပျောက်လွယ်ပါတယ် ၂။ ဝက်ခြံကြီး ဒါကတော့ အပြည်တည်တဲ့ဝက် ခြံမျိုးပါ။ အဝါရောင်အလုံးကြီးတွေ … Read more
အမေရိကန်နိုင်ငံ New York မြို့မှာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး စတင်
အမေရိကန်နိုင်ငံ New York မြို့မှာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး စတင် အမေရိကန်နိုင်ငံ New York မြို့မှာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး စတင်နေပီလို့ သိရပါတယ် အားလုံးလဲ ဂရုစိုက်ကြပါ မြန်မာနိုင်ငံကြီး အမြန်ဆုံး အေးချမ်းနိုင်ပါစေ…။ ကပ်ရောဂါ ဘေးဆိုးအမျိုးမျိုးမှ လွတ်ကင်းစေသော အန္တရာယ်ကင်း ဂါထာတော် ကပ်ဆေးခြင်းဘေးမှ လွတ်ကင်းကြစေရန် “ အဋ္ဌာန မေ တံ ” ဂါထာတော် ရွတ်ပါ ဤဂါထာတော်သည်ကား ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကို အရှင်ဒေဝဒတ် ကျောက်မောင်းဆင်၍ လုပ်ကြံပြီးကာစ ပုထုဇဉ်ရဟန်းတော်တို့က ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်အတွက် စိုးရိမ်ကြသဖြင့် တုတ် တောင်ဝှေး စသည်တို့ဖြင့် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကို အကာအကွယ်ပေးရန် စုဝေးရောက်ရှိလာကြရာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်က ကာကွယ်ပေးရန်မလိုကြောင်း ရှင်းလင်းမိန့်ကြားတော်မူရာတွင် တစ်ကြိမ်။ နောက်နေ့ မြို့တွင်းသိုိ့ ဆွမ်းခံကြွမည့်အချိန် … Read more